Onye na-enye ihe n'ọkpụkpụ metal China Manufacturer
Nkọwa:Nri Cost Straightener na Decoiler,Igwe eji akpo Stamping,Ngwunye Ime ụlọ
Home > Ngwaahịa > Decoiler Straightener Feeder > Inye Nri na Ngwunye Aka > Onye na-enye ihe n&#39;ọkpụkpụ metal
Metal eriri igwe nnennen ENER feeder
Ndị na-ahụ maka ọla bụ ihe dị na mbara igwe dị mkpụmkpụ iji mepụta mkpa ndị ahịa na-ezughi oke. Ha na-enye ntụkwasị obi nke usoro ọbụna maka ihe ndị kachasị achọ. Ha na-adaba adaba maka imepụta akụkụ akụkụ yana maka nhazi nke ihe ndị nwere ike dị elu - ọbụlagodi ogo dị larịị dị warara.
Onye na-enye ihe n'ọkpụkpụ metal adabara ụdị stampụ ụgbọ ala, imepụta ngwa ọrụ, kọmpụta na kọmputa, ihe ngwaike na akụkụ igwe wdg.
Ọdịnihu nke Onye na-ahụ maka ihe eji eme ka ọla
Onye na-ahụ maka ihe eji eme ihe, ihe eji arụ ọrụ, ihe eji arụpụta ihe eji arụ ọrụ, kọmpụta na igwe elektrọnik, akụkụ ngwanrọ na nke igwe wdg .Azụ arụ dị iche iche: Bracket, Damper, Barke Pad, Tie Bar, ngwa eletriki, akụkụ nke ihe eji ebi akwụkwọ, mpụta kọmpụta, slide. Ilgbọ elu nke oche ụgbọ ala, sọlfọ ahụ nke ụgbọ ala wdg.
Onye na-ahụ maka ọkpụrụkpụ metal n Short Space Design na -arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị ahịa anyị.
Nke a bụ otu n'ime ndị ahịa anyị na Slovenia, ha na-arụpụta akụkụ etiti kọmputa na Metal Coil Straightener Feeder.
Kọlụm nri nri Kpọtụrụ ugbu a
3 Na 1 Nweta NC Servo Straightener Feeder Kpọtụrụ ugbu a
Nri Cost Straightener na Decoiler Igwe eji akpo Stamping Ngwunye Ime ụlọ Nri Cost Straightener Servo Nri Cost Straightener Cost Straightener na Ekpuchi Mpempe akwụkwọ Cost Straightener na Decoiler NC Straightener na-enye nri na Decoilers